शैलेन्द्रराज गिरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, मेरो जब डटकम
पढाइ सकिनेबित्तिकै जागीर पाइहाल्ने वा योग्य मानिने अवस्था अब रहेन । शैक्षिक प्रमाणपत्र बलियो भए पनि प्रयोगात्मक ज्ञान नहुँदा फिल्डमा गएर काम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा सजिलै अभ्यस्त हुन पढाइसँगै काम गर्नु जरुरी ठान्छन् मेरो जब डटकम संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरी । १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोजगारी र जनशक्तिबीचको पुलको काम गर्दै आएका उनी नेपालको शिक्षा र रोजगारीका अवसरका सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान राख्छन् । उनले देशका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सरकारी निकाय तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत जनशक्ति व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, सोसाइटी फर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका प्रमाणपत्र प्राप्त प्रशिक्षकका साथै एनएलपी कोच समेत उनी मेरो जब डटकमसहित तीन कम्पनीमार्फत सेवा दिइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, रोजगारी बजार, जनशक्ति माग तथा आपूर्तिको अवस्था, शैक्षिक प्रणाली लगायत विषयमा गिरीसँग आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :
रोजगारी बजारको अवस्था हेर्दा कुन क्षेत्रमा बढी जनशक्तिको माग छ ?
सन् २०१८ को शुरूदेखि अहिलेसम्मको मेरोमा संकलन भएको तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी माग सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा छ । यस क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन पनि नभएको होइन । तर माग त्योभन्दा धेरै बढिरहेको छ । दोस्रोमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कलेजसम्मको शिक्षण क्षेत्रमा माग छ । शिक्षणमा निश्चित विषयमा मात्रै नभई सबै विषयमा जनशक्तिको माग उच्च छ । तेस्रोमा विक्री तथा बजारीकरण (सेल्स एन्ड मार्केटिङ)मा छ । यसलाई पनि छुट्ट्याउने हो भने सेल्समा जनशक्ति माग बढी छ । यसमा खासगरी एफएमसीजी प्रडक्टको सेल, गाडीहरूका शोरूमबाट हुने सेल छन् । त्यसैगरी सेल्सअन्तर्गत नै सेवा क्षेत्रमा रिसर्च डेभेलपमेन्ट अफिसर, प्रपोजल राइटर जस्ता अवसर धेरै छन् । त्यसैगरी मार्केटिङतिर हेर्दा डिजिटल मार्केटिङमा धेरै जनशक्ति माग छ ।
चौथोमा, विज्ञापन एजेन्सी सम्बन्धी रोजगारीको अवसर रहेको छ । जस्तै ग्राफिक डिजाइनिङ, कपी राइटर, कन्टेन्ट राइटर तथा क्लाइन्ट सर्भिसिङ जस्ता काम पर्दछन् । त्यसपछि पाँचौंमा एनजीओ÷आईएनजीओ पर्दछन् । यसमा चाहिँ नयाँभन्दा पनि अलिकति अनुभव भएको मान्छे खोजिन्छ । यसमा एम एन्ड ई, अनुसन्धाता, एडमिन फाइनान्स अफिसर जस्ता अवसर छन् ।
जनशक्तिको माग अनुसारको आपूर्ति छ कि छैन ? कुनै क्षेत्रमा अभाव नै छ कि ?
जनशक्ति आपूर्तिका हिसाबले सबै क्षेत्रमा छन् । त्यसैले यसमा चाहिँ अभावै छ भन्न सक्ने स्थिति त छैन । तर खोजेजस्तो गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव सबै क्षेत्रमा छ । यसो हुनुको कारण शिक्षा प्रणाली नै हो ।
सूचना प्रविधि विषयमा विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ कार्यक्रम आइसके । तर पढाइ चाहिँ बजारको आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक भएको छैन । यस हिसाबले सोही अनुसारको कार्यक्रम चाहिएको छ ।
सेल्स एन्ड मार्केटिङ पढाइ हुन्छ । यो पढाउने भन्दा बढी प्रयोगात्मक गरेर जान्ने कुरा हो । यसका लागि फिल्डमा जानुपर्ने हो भने त्यहीँ गएर बेचेको, मान्छेलाई भेटेको हुनुपर्छ । शोरूममा हो भने त्यहाँ बसेर कस्ता ग्राहक आउँछन् र कसरी डिल गर्ने रहेछ हेरेको हुनुपर्छ । तर शिक्षामा यस्तो गहिरोसँग अभ्यासका पक्ष नै समेटिएको छैन । यसले गर्दा पढेर उत्तीण त हुन्छन्, तर विक्री गरेर देखाऊ त भन्यो भने सक्दैनन् ।
हामीकहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । यसको कारण के होला ?
यो अभाव यहाँ मात्र होइन, संसारभर नै हो । किनभने समयसँगै बदलिँदै जाने कामका प्रकृतिले नयाँ नयाँ अवसर सृजना गर्दै गएका हुन्छन् । अनि त्यहीअनुसार जनशक्ति उत्पादन प्रणाली अगाडि नबढ्नाले यो अवस्था आउने हो । कलेज र उद्योगबीचको अन्तरसंवाद भएर कोर्स डिजाइन गर्ने चलन छैन । यसका लागि पनि पाठ्यक्रम परिवर्तनको ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नहुने हो भने उद्योगले नै कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भारतमा यो क्रम शुरू भइसकेको छ । त्यहाँ आईटी कम्पनीहरू मिलेर एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय नै खोलेका छन् ।
कलेजहरूले उद्यमी, व्यवसायीलाई गेस्ट लेक्चरका लागि ल्याउने अभ्यास छ । त्यसले मात्रै पुग्दैन भन्ने हो ?
उहाँहरू त आउनुहुन्छ, लेक्चर दिनुहुन्छ, आफ्ना अनुभव सुनाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ । त्यतिले विद्यार्थी भोलिको जब मार्केटका लागि तयार हुँदैन । यो भनेको त भोलि पौडी खेल्नुपर्ने मान्छेलाई पौडी यसरी खेल्नुपर्छ, मैले यसरी खेलेँ भनेर लेक्चर दिए जस्तो मात्र हो । न पढेर, न भिडियो नै हेरेर पनि पौडी खेल्न सिकिन्छ । साँच्चै पौडी सिकाउनकै लागि त पानीभित्रै लगेर सिकाउनुपर्छ । पानीभित्र छिरेपछि पानीको स्वभाव, गहिराइ, त्यहाँ पस्दाको अनुभूति मिले जस्तै कार्यक्षेत्रमा छिरेपछि बल्ल त्यसका सम्बन्धमा पनि वास्तविकता बुझिन्छ । सिग्नेचर नमिलेर बैंकको कारोबारमा कत्तिलाई समस्या परिरहेको हुन्छ । तर पढ्ने बेलामा कहिल्यै सिग्नेचर गर्नै सिकाइएको हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, बायो डाटा बनाउन, कभर लेटर लेख्न, प्रपोजल लेख्न, अन्तरवार्ता दिन केही सिकाइँदैन र पढाइ सकिएको भोलिपल्टै कामका लागि जाँदा चाहिने पहिलो चीज भनेकै तिनीहरू नै हुन्छन् । यसले हातमा ब्याचलर वा मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट भएको मान्छेमा पनि मैले यसै गर्ने हो भन्ने स्पष्टता र आत्मविश्वास हुँदैन ।
यसको मतलव पढाइभन्दा बाहेक पनि थप शीप सिकाउनुपर्ने अवस्था छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । त्यसैले त सरकारी सेवाअन्तर्गत निजामती, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, कृषि विकास बैंकहरूले नाम निकालिसकेकाहरूलाई आप्mना तालीम केन्द्रमार्फत तालीम दिएर मात्रै काममा खटाउने व्यवस्था छ । यसले सोझै कामको जिम्मेवारी दिन सकिने जनशक्ति निर्माणका लागि आवश्यक शैक्षिक प्रणालीको अभाव रहेको देखाउँछ । आजभोलि अन्य बैंकहरूले पनि लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमार्फत गराएर, सिकाएर, बुझाएर मात्र नियमित काममा लगाउन थालेका छन् ।
स्नातकमा भर्ना हुन लागिरहेका विद्यार्थीलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
पढाइसँगसँगै काम गर्नुस् । काम त एसएलसी सकिनासाथ शुरू गर्नुपर्छ । जसले एसएलसी सकिनासाथ सानातिना भए पनि काम गर्दै पढ्छ, उसको स्नातक सकिँदा ४ वर्षको अनुभव हुन्छ । त्यसले उसलाई जब मार्केटमा सिलेबल बनाउँछ । १ घण्टा गर्नुस् वा पाँच घण्टा गर्नुस्, काम चाहिँ गर्नुस् । त्यो काम भनेको जागिरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । आफन्त, चिनजानको मान्छेको पसल वा अन्य कुनै काममा हल्का सघाउने काम गरे पनि हुन्छ ।
मेरी छोरी अहिले १२ वर्षकी भइन्, ७ कक्षामा पढ्छिन् । उनले काम सिक्ने इच्छा देखाइन् । मैले आफ्नै अफिसमा ल्याएँ र काम सिक्ने भए निवेदन देऊ भनेँ । बाल श्रमशोषणको हिसाबले नभई उसले काम सिक्ने हिसाबले केही समय अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा कागजपत्र मिलाउन राखिदियौं । त्यो क्रममा उनले रिसिट भौचर, पेमेन्ट भौचर हुँदो रहेछ भन्ने सिकिन् । त्यसपछि एचआर डिपार्टमेन्टमा राखिदियौं । एचआरले को मान्छे ढिलो आउँदो रहेछ, को चाँडो आउँदो रहेछ हाजिरी हेरेर, जोड घटाउ गरेर निकाल्न दियो । यसबाट उनले अफिसमा चाँडो आउने पनि ढिलो आउने पनि मान्छे हुँदा रहेछन् भन्ने एचआरको विषय बुझिन् । मार्केटिङअन्तर्गत फेसबुकमा कुन पोस्टमा कति लाइक आउँदो रहेछ हेर भन्दा त्यो विषय पनि बुझिन् ।
यस्ता कुरा बुझ्न स्नातक पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि । यी कुरा कलेजमा पढाइँदा पनि पढाइँदैन । त्यसैले सबै कुरा कलेजबाट आश गर्नु पनि हुँदैन । केही भएन भने घरको नजिकैको रेस्टुराँमा गएर बेलुका म तपाईंको हिसाब किताब गरिदिन्छु, पैसा चलाउँदा पनि चलाउँदिनँ र मलाई पैसा दिनु पनि पर्दैन भन्यो भने काम दिन सक्छ । काम राम्रो लागे दैनिक आएर हिसाब गरिदेऊ, म दिनको वा महीनाको यति दिन्छु भनेर भन्न पनि सक्छ । त्यसबाट सिक्ने अवसर पाइन्छ । हिसाब किताब राख्ने क्रममा त्यहाँका कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् ? सुपरभाइजरले कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउँदो रहेछ ? सुपरभाइजरलाई टेरेन भने के गर्नुपर्ने रहेछ ? कस्ता ग्राहक आउँदा रहेछन् ? कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ ? सबै देख्ने अवसर हुन्छ । यो चलन विदेशमा छ । त्यहाँ विद्यालयको पढाइ सकिएपछि सबै काम सिक्न पार्टटाइम काममा जान्छन् । त्यो हामीकहाँ पनि गर्नु जरुरी छ ।
तपाईं धेरै कलेजमा गेस्ट लेक्चररका रूपमा निम्त्याइनु हुन्छ । धेरै कलेजको बारेमा पनि जानकारी छ । विद्यार्थीलाई यस्ता कलेज राम्रो भन्ने केही छ ?
सबै कलेजले कसरी आफ्ना विद्यार्थीलाई जब मार्केटका लागि योग्य बनाऊँ, ता कि उनीहरूको भविष्य राम्रो होस् भनेर प्रयास गरिरहेका छन् । कलेजहरूले विद्यार्थीलाई जब मार्केट बुझाउन इन्टर्नशिप गराइरहनु भएको छ । तर छोटो समयको कोर्सअन्तर्गतको इन्टर्नशिपले मात्र पुग्दैन । माथि भने जस्तै अन्य तरीकाले पनि काम गर्दै जाने हो भने बल्ल इन्टर्नशिपमा जाँदा काम बुझिन्छ । कलेजहरूले भिजिट त लैजान्छन्, तर धेरैजसोले उद्योग भ्रमण गराउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर घुमाएको देखिन्छ । केही कलेजहरूले भने बाहिरसँगै उद्योग पनि घुमाउने, त्यहाँ हुने उत्पादन, व्यवस्थापन जस्ता कुरा देखाउने गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीले पढाइ र देखाइको सामञ्जस्य गर्न सिक्छन् । यसका लागि कलेजले कति पैसा लिएको छ र कति खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।
त्यसो हो भने त धेरै खर्च गर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीले यस्ता अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यस्ता विद्यार्थीले अवसरबाट वञ्चित पनि हुनु नपरोस् र आफ्नो आर्थिक अवस्थाले पनि धान्ने होस् भन्न कस्ता कलेजमा पढ्नुपर्ला ?
कलेज त जस्तो पढे नि हुन्छ । अझ सुविधा हुन्छ भने पार्टटाइममा पढ्ना पनि भयो । तर काम चाहिँ सिक्नुपर्‍यो । कलेजबाट उत्तीर्ण भएपछि पनि काम नै गर्ने हो । त्यसमा पनि ब्याचलर सकेर खुरुखुरु मास्टर्स गर्ने पनि होइन । ब्याचलर सकिएपछि उसले गरिरहेको पार्टटाइम काम फुलटाइम गर्ने हो । २–३ वर्ष काम गरिसकेपछि ‘मलाई यो क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने जब ठहर हुन्छ, तब त्यही क्षेत्रलाई सहयोग हुने विषयमा मास्टर्स गर्ने हो । त्यसो हुँदा जुनसुकै आर्थिक अवस्थाको परिवारको विद्यार्थी भए पनि ब्याचलरको पढाइसँगै काम गर्नुपर्छ । यसले काम गर्ने बानी बस्छ । बेलैदेखि काम सिकिएन भने पछि आफू धेरै पढेर जब मार्केटमा छिर्न खोज्दा आपूmभन्दा कम पढेको मान्छेको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहंकारले त्यो सहन सक्दैन र मान्छे विदेशिन्छ । अभिभावकले बेलैदेखि काम गर्नुपर्छ है भन्ने र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने गर्नुपर्छ । काम चाहिँ आफैले खोज्ने, बुझ्ने र गर्ने हो । हाम्रो देशका युवाहरूमा साह्रै अल्छीपना छ । ममा पनि थियो । तर जुनबेला म झसंग भएँ, त्यतिबेला ब्याचलर सकिइसकेको थियो । त्यतिबेला रेज्युमी बनाउनुपर्ने रहेछ, अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बल्ल थाहा भयो । अन्तरवार्ता कसरी दिने भन्ने पनि थाहा थिएन । आफ्नो त्यही सिकाइकै कारण अरूलाई त्यस्तो नपरोस् भनेर पछि आवश्यक पर्ने कुराहरू बेलैमा सिक्दै गर्नुहोस्, जब मार्केट चिन्दै गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव हो ।